> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: 2010
ငါသည် တရားဟောဆရာမဟုတ်။ သို့သော် ငါယခု တရားဟောရတော့မည်။ သို့သော် တရားဟောစင်မြင့်ပေါ်သို့ ငါရောက်နေပြီ။ ထို့ကြောင့် ငါတရားဟောရတော့မည်။ ငါဘာမျှမသိ။ ငါဘာမျှမသိကြောင်းကို စတင်ဟောမည်။ အမှားနှင့်အမှန်ကို ငါပြတ်သားစွာ မခွဲခြားတတ်။ အမှားနှင့်အမှန် ငါမခွဲခြားတတ်ကြောင်းကိုဟောမည်။ ထပ်ဆင့်၍ အမှားနှင့်အမှန်သည် အမြွှာညီအစ်ကိုသဖွယ် ခွဲရခက်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ရောပြွမ်းနေကြာင်း၊ ငါတို့၏ သိမှုကို အလုပ်ရှုပ်စေကြောင်း၊ ငါ့ထင်မြင်ချက်များကိုလည်း ထည့်ဟောမည်။ လူတစ်ယောက်အဖို့ အသက်ရှင်နေရခြင်းထက်ပို၍ တန်ဖိုးမြင့်မားသောအကြောင်းများ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သော အကြောင်းများ တည်ရှိနေဖို့အတွက် အသက်ရှင်ခြင်းသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ငါဟောမည်။ သို့ရာတွင် ငါဘာမျှမသိ။ ငါ့ကိုယ်ငါ သိနေသည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းများသာရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကိုလည်း ငါဟောမည်။ စနေနေ့ကသောက်ခဲ့သော အရက်သည် တနင်္ဂနွေနေ့အထိ အမူးမပြေသေး။ ငါသည်ယခုအထိ အမူးမပြေသေးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဘဝများ (ရှိသူဆိုလျှင်) ထိုသို့တိုင်အောင် ငါအမူးပြေလိမ့်မည်မထင်။ အကြောင်းမှာ ငါသောက်ခဲ့သောအရက်က ပြင်းလွန်း၍ ဖြစ်သည်။ တရားဟောခြင်းသည် ငါ့အသက်၏ ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် တရားဟောရန်ငါရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုတရားဟောစင်မြင့်ပေါ် ငါရပ်နေသည်။ ငါ့အတွက် လက်ခုပ်သြဘာသံမလို၊ ငါ့အတွက် သဘောတူညီမှုမလို၊ ငါ့အတွက် ချီးမွမ်းစကားမလို။ ငါတရားဟောဆရာမဟုတ်။ သို့သော် ငါ ယခု တရားဟောရလိမ့်မည်။ ငါ့အန္ဓအဖြစ်ကို ငါ ဟောမည်။
အကြောင်းမှာ ငါ့အသံက ကျယ်လောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ငါ့ဟောပြောချက်ကို နားဆင်သူမရှိလည်း ငါဆက်ဟောရလိမ့်မည်။ လူတွေကို ငါမနှစ်သက်။ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း မနှစ်သက်၊ ငါ့ကိုယ်ငါ မနှစ်သက်ရခြင်းမှာ ငါသည် လူတစ်ယောက်မျှသာဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
၂၀၀၃၊ ၆၊ ၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 8:21 PM
လှေ နေသော လူးလွန့် မှု အစဉ်
အနာတရ ဖြစ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင် ကိုတွေ့ခဲ့သလို တွေ့ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အကောင်းပကတိ ကျန်းမာနေတာလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။
စတွေ့ တာ ဘယ်အချိန် ကမှန်းမမှတ်မိ။ မှတ်မိတဲ့အချိန်မှာ သွက်သွက်ခါအောင် ရူးနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ခဲ့သည်လား ၊ ဖြစ်ဆဲလား။
ခု ထိ ရူးနေတုန်းလို့ ဆိုရမလို ခဏနေ ကောက် ကောင်းသွားသည်။
အများကြီး ဆက်ဆံ ခဲ့ ကြဖူးသည်။ ပူးဝင် ဆန့်ထွက် ခဲ့ဖူးသည်။
ရူးလျှင် ကောင်း၍ ၊ ကောင်းလျှင် ရူးသည်။ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တည်း ရွေးမရပါ။
အမှန်က အမှန် က ဒီမှာလေ။
အမြဲ ရှိနေခဲ့သည်။ ပျောက်ချင်လျှင် ပျောက်သွားသည်။ အမြဲ ရှိနေသည် ဟုထင်သည်။
တစ်ခါတလေ ရှေ့က သွားသည်။ တခါတလေ နောက်ကလိုက်သည်။
တခါတလေ ရှိမနေလောက်အောင် အမြဲ ရှိနေခဲ့သည်။
ဘာပဲပြောပြော ရူးနေတာပဲ မဟုတ်လား။
ဒါဆို ကောင်းနေလို့ပဲ နေမယ်။
(ဒီအပိုဒ်မှာ ဇာတ်လမ်း က ၀င်လာတယ် ညာခဲ့ရတာလား မညာခဲ့ရတာလား။) (ဘယ်တုန်းကမှ ပါတယ်) (ဘာ မညာ ရမှာတုန်း)
ပုံပြင်သည် အတို အရှည် မညီ တစ်ပုဒ်တည်းခွဲထွက်လာသည်။
ဇာတ်လမ်းဆင် ပြောသည်။ တခွန်းဟတာနဲ့ စ လိမ်ညာနေတော့သည်။
မညာစရာ ဒီ မုသားပဲရှိတယ်။
ဖြားယောင်းခံရခြင်းမှာ လမ်းဆုံးရှိတယ်ဆို ရင်
လမ်းဆုံးကို ဘယ်တော့မှ ရောက်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။
ဇာတ်လမ်းသည် သည်နေရာတွင် မိုးကြီး ၏။ လေတိုက်၏။
အဲ့ ဘောလုံး လေးကိုလေ မပစ်လိုက်ပါနဲ့ မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဘုရားသခင်ရေ။
ဘာ ဘုရားသခင် မရှက်ဘူးလာ။
အမှောင်ထဲတွင် အမည်း ပျောက်နေသည်။
အဖြူထဲတွင် အဖြူ ပျောက်နေသည်။
အဖြူထဲ မှ အမည်းကျတော့ မည်းသည်။
ပြေးရဲတာထက် လိုက်ရဲတာ သတ္တိ
နောက်မှာ ၊ ရှေ့မှာ ၊ တောင်မှာ ၊ မြောက်မှာ ၊ အထက်မှာ ၊ အောက်မှာ
ဒီနေရာမှာ မွန်းလိုက် ဆိုနာတာ လိုလို ဖာအီလိုက်လိုလို ပီယာနိုတေးသွားဝင်လာသည်။
၀တ်စုံ အမည်းများ ၀တ်ထားသော များ မိုးမှောင်ကြီးထဲတွင် သံပြိုင်သီဆိုကြသည်။
စိမ်း ခါးဖန့်ဖန့် အရွက်ပါ။
တမာရွက် ခေါ် သကွ။
လွယ်သားပဲ။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမည်။
ဟိုမှာ မြင်လား။ ဘာပြောမလဲ။
လိမ်ညာခြင်းဟာ အပြစ်မရှိပါလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။
အပြစ်ရှိရင် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ရှိတာပဲလား။
ဘယ်သူပေးလဲ။ ဘယ်ကရလဲ။ ဘယ်သူစီရင်သလဲ။
ကျားနာ တစ်ကောင်လို ခဲပလိုက်သည်။ ငါးမန်းတစ်ကောင်လို ရုန်း၍ ခဲလိုက်သည်။
မိကျောင်းတစ်ကောင်လို ရေနက်ထဲ ဆွဲနှစ်လိုက်သည်။
ထို အပြုံးကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ အနာဂတ် ကို အပြုံး ထဲ ထည့်၍ လိမ်ညာကြည့်သည်။
နေသာသားပဲ။ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမယ်။ ဘယ်သူပေးမတဲ့တုန်း။
စတွေ့ စက မရူးပါ။ ဘာသာ စကား ဘယ်သူပေးသတဲ့တုံး ဘယ်တုန်းက။
အသံ ကင်းမဲ့စွာ အော်ငေါက်ပလိုက်သည်။
လေဟာနယ် ထဲ ပြေးဝင်သွားသည်။
မောနင်း ဟု မောနင်း ဟု မောနင်း ဟု သတိရပါတယ်ဟု သတိရလိုက်တာဟု
မင်း လူမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒါဆို အတောင်ပံများ ဖြန့်ထုတ်လိုက်သည်။
ညာဘက်ကြွက်သားများကို အားကုန်လှုပ်ကြည့်လိုက်မိသည်။ အနီးနားရှိ သစ်ရွက်များတစ်ချို့ လှုပ်ခတ်သွားသည်။
ညာရော ဘယ်ရောလှုပ်ကြည့်သည်။ ပေါ့ပါးသလိုလို စတင်ခံစားရတော့သည်။
ခြေပိုင်းကို အားစိုက်၍ ကန်ထုတ်လိုက်သည်။
ထိုမှ သည်သို့ သည်မှ ထိုသို့ စည်းချက်များ စည်းကပ်သွားသည်။
ဘာသာစကားနဲ့ပဲ သိတဲ့ သိမှု နဲ့သာ လူဖြစ်မြောက်သည်။
ဟု စဆုံးက ဟာကို သိသလို လိမ်လိုက်သည်။
နာစူးနေသော ဘယ်ဖက်တောင်ပံကို စမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။
မရူးတော့ပါ။ မသိတော့ပါ။ ဟု သိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းဆင်ရေးသားခြင်း ၊ လိမ်ညာခြင်း ပြီးသွားပြီ ဟု
တဆိတ် ထင်လိုက်မိသည်။ နေသာထိုင်သာရှိလာသည်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းကို ဒီမှာ သိမ်းလိုက်သည်။
အရေးပါအရာရောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်။ လက်မတင်ကလေး လွတ်သွားတဲ့ အခွင့်အလမ်းများနဲ့ ဒုက္ခရောင်စုံများစာရင်း။ အနုပညာအသစ်၊ ချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းနည်းအသစ်၊ ထပ်တိုးအချက်အလက်နှင့် သတင်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ တိမ်တိုက်သစ်များ■ ပိန်းပိန်းပိတ်အမှောင်ထုကြား လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက် အလင်းတစ်စ လက်ကနဲ မြင်လိုက်ရသည်■ ဖလော်ရီဒါဖက်မှာ ၇လပိုင်းလောက်တုန်းက ရေဆင်းကူးသူတစ်ယောက်ကတော့ ခုထိပြန်တက်မလာတော့ပါ (Sailing across the Atlantic ocean is my dream ဟု သူဆိုခဲ့သည်။) သို့ရာတွင် ဆုံးရှူံး / ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးသားဟု တွေးထားခဲ့သော အတိတ်မှ နှစ်လိုဖွယ် အော်ဟစ်ဆဲဆိုသံများသည် မော်နီတာလုံးဆိုင်ရာ ဖဘနှင့် တွစ်တာစာမျက်နှာများပေါ်ကတစ်ဆင့် ၀မ်းပန်းတသာ တိုးထွက်လာကြကာ အပြင်မှာပါ တကယ်ပြုံးပျော်စေမိတော့သည်■
အခြားသော မှတ်သားဖွယ် အခြင်းအရာ တစ်ခုမှာ အမိုးခုံးချင်းဆက်နေသော ရင်ခွင်ရပ်ဝန်းထဲသို့ ကုလားအုတ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို ၀င်ရောက်လာသော (ချစ်ခြင်း)မေတ္တာတရား ဖြစ်သည်။ ဆံပင်
-ရောင်ဆိုးထားသော မေတ္တာတရား စတင်ဝင်ရောက်လာသောအခါ ခန်းလုံးပြည့် ရှိနှင့်နေပြီးသားဖြစ်ကြသည့် ဒုက္ခ၊ ဒဏ်ရာ၊ သောကပရိဝေဒများနှင့် အခြားသော ဝေဒနာရပ်ဆိုင်ရာ အမာရွတ်များအာလုံး မတ်မတ်ရပ်၍ သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သခဲ့ကြလေသည်■﻿
Posted by Thi Ha Thu at 9:00 PM
Labels: ကြယ်ငေးသူ #၁၃
ရိုးရှင်းစွာ ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ အရာဝတ္ထုများ
မှတ်မှတ်မိမိ မမှတ်မိတော့တဲ့ ကောင်မလေး
၁၂၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 9:10 PM
ငါ့ကို တစ်ယောက်တည်း ပစ်ထားကြတယ်။ ငါ့အခန်းထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း။ စားပွဲပေါ်မှာ သူတို့ပေးပို့ထားတဲ့ ညစာကအေးစက်လို့။ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်က ညစာပန်းကန်ပေါ် လျှောက်သွားနေတယ်။ သူတို့ တဝါးဝါးရယ်သံတွေ တစ်ချက်တစ်ချက် ငါ့အခန်းထဲကို ခပ်သဲ့သဲ့ ဝင်လာကြတယ်။ ငါဆီးသွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါထလို့မရဘူး။ ဆီးအိုးကို သူတို့မသွန်ပဲထားတာ နှစ်ရက်တော့ရှိပြီ။ ငါဖတ်ချင်ရင် ဖတ်နိုင်အောင်လို့ စာအုပ်တွေ သူတို့ပို့ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါကြာကြာအာရုံမစိုက်နိုင်ဘူး။ စာအုပ်တွေကို ငါသိပ်ဖတ်ခဲ့တာပေါ့။ ဘယ်လောက်ဖတ်သလဲဆိုရင် ငါကိုယ်တိုင် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုအချိန်မှာ ငါဟာ ဘယ်သူမှ မဖတ်ချင်တော့တဲ့ စာအုပ်ဟောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ သူတို့ တဝါးဝါးရယ်သံတွေနဲ့အတူ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးသံတွေပါ ပိတ်ထားတဲ့ပြတင်းကိုဖြတ်ပြီး ငါ့အခန်းထဲဝင်လာပြန်တယ်။ ပိုးဟပ်က ညစာပန်းကန်ပေါ် လျှောက်သွားနေတုန်းပဲ။ အေးစက်နေတဲ့ညစာ မသိုးခင် ငါစားဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ ငါသူတို့ကို တစ်ခုခုပြောချင်တယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဖီလော်ဆော်ဖီတွေ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဖီလော်ဆော်ဖီတွေ သုံးမရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သူတို့ငါ့ကို ဖောင်တိန်နဲ့ စာရွက်တွေပေးထားတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ငါ့လက်က ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းကို မြဲအောင် မကိုင်နိုင်ဘူး။ စာရွက်လွတ်တွေကိုကြည့်ရတာ စိတ်သက်သာရာ နည်းနည်းရလာသလိုပဲ။ ငါသိထားတာတွေဟာ လူနှစ်ယောက်စာလောက် သိထားတာဆိုတော့ ခုချိန်မှာ ငါ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာဟာ ဗလာစာရွက်တွေပဲဖြစ်လိမ့်မပေါ့။ ငါ့ကိုတစ်ယောက်ထဲ ပစ်ထားကြတယ်။ အခန်းထဲမှာ ငါရယ်၊ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်ရယ်၊ ကြမ်းပိုးတွေရယ်၊ ပြီးတော့ ပင့်ကူနှစ်ကောင်ရယ်လေ။ ပိုးဟပ်က ညစာပန်းကန်ကိုစွန့်ခဲ့ပြီး၊ အခန်းထောင့်က ဆပ်ပြာခဲဆီရောက်သွားတယ်။ ဆပ်ပြာခဲကို ကိုက်ဝါးစားနေတယ်။ သူတို့ဆီက ရယ်သံတွေ အခန်းတံခါးကိုဖြတ်ပြီး ခပ်သဲ့သဲ့ဝင်လာပြန်တယ်။ ရယ်နေတာဟာ ငိုနေတာထက်စာရင် ပိုကောင်းမှာပေါ့လို့ ငါ့လည်း ဟိုတုန်းကတော့ ထင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။
၂၀၀၂၊ ၁၀၊ ၂
ည ၉း၂၅ နာရီ
Posted by Thi Ha Thu at 4:54 PM
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၈)
နားထောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်များကို
ဒီနေ့မှာ ငါ့ကို ငါ ပြန်ကြည့်မိတော့
မှန်ထဲက ငါ့ကို ငါ ပြန်မမှတ်မိတော့
Posted by Thi Ha Thu at 3:23 PM
မနက်စောစော ကျွန်တော် တောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ သည်နယ်နိမိတ်က တောင်တွေဟာ ပျော့စိစိနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ပျော့စိစိတောင်တွေပေါ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားရတာပဲ။ မကြိုးစားလို့မရဘူးဗျာ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျား ဘာတစ်ခုခုကိုမှ မကြိုးစားဘဲ ဒီအတိုင်းနေမယ်ဆိုပါတော့။ မကြိုးစားဘဲနေဖို့ ကြိုးစားရပြန်တာပဲမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် သည်နယ်နိမိတ်က တောင်တွေပေါ် ကျွန်တော်တက်ခဲ့တာပါ။ တောင်ရဲ့အမြင့်ပိုင်းကို ရောက်လေလေ ကျွန်တော့်အတွေးတွေ ဆန်းလာလေလေပဲ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တက်နေတာဟာ တောင်တစ်တောင်မဟုတ်ဘဲ ဧရာမမျှော့ကြီးတစ်ကောင်လို့ ထင်မိလာတယ်။ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်း ခြေဖဝါးအောက်မှာ ပျော့စိစိနဲ့။ မျှော့ကြီးက ကမ္ဘာမြေရဲ့အတွင်းသားထဲက အဆီအနှစ်တွေကို ဘာကြောင့်စုပ်ယူလို့ မဝနိုင်သေးတာလဲ။ ပျော့စိစိတောင်ပေါ်ကို ကျွန်တော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလံကို ကျွန်တော် မစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဧရာမမျှော့ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ အရေပြားပေါက်ပြဲသွားရင် ဘာတွေပန်းထွက်လာမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတတ်မပြောနိုင်ကြဘူးလေ။
၂၀၀၂၊ ၉၊ ၁၆
ည ၉း၄၂ နာရီ
Posted by Thi Ha Thu at 2:27 PM
တစ်ချိန်က လှပဝေဆာစွာ အကွပ်မျက်ခံခဲ့ရဖူးသော
နယ်ရုပ်များ၊ မြင်းများ၊ ဘုန်းကြီးများ၊
ကိုယ့်ဘုရင်ကိုယ် သစ္စာဖောက်သော မြွှေဟောက်မ
လူ့မှတ်ဥာဏ်ကိုပင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စိန်ခေါ်နေကြသည့်
မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပင် မူးယစ်သွားစေနိုင်သော မူးယစ်ဆေးဝါးများ
တဆစ်ဆစ် နာကျည်းခါးသီးစွာ အော်ဟစ်ညည်းညူနေခဲ့သော
အိပ်ခါနီးအထိ စီးကရက်မီးခိုးတွေ တလွင့်လွင့်
“ကျောသားရင်သား ခွဲခြားနေဦးမှာလား” ဟူသော မေးခွန်းကို
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ တစ်ဦး၏ ရင်ထဲမှ
မေ့ထားလိုက် မေ့ထားလိုက်လေဟု ပြောမိနေကျ
ခံစားချက်ကင်းမဲ့စွာ ထုံကျင်အေးစက် ရက်စက်မာကျောလာသော
ဘာမှန်းမသိသည့် အရာတစ်ခုခု ရှိခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီကို
သူဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့သော်လည်း ...
Posted by Thi Ha Thu at 4:32 PM
ကျားကွက်သစ်၊ အဝိုင်းထိပ်၊ လှည်းတန်းမှသည် မှေးမှိန်သွားသော အတိတ် ခဲခြစ်ကောက်ကြောင်းများ
လေထဲက အမှုန်တွေကို ဖမ်းဆုပ်လို့ ရနိုင်ပါမလား
ကျားကွက်သစ်ဟာ အသက်ဝင်မြဲ၊ အသက်ဝင်နေဆဲ
ကျစိမ့်ဟာ ကျစိမ့်အရသာ အမြဲပေါ်ဖို့
နှုတ်မှ တဖွဖွ ရွတ်တယ်
“မင်းမရှိလည်း ဖြစ်တယ်... ငါ့ရဲ့ မရှိမဖြစ် မိုး”
လှည်းတန်း - လူအုပ် နဲ့ ဘတ်စ်ကားများ
ညနေဆို အဝိုင်းထိပ်မှာ ရှိမယ်
ညနေဆို အဝိုင်းထိပ်က ထိုင်နေကျဆိုင်မှာ ရှိမယ်
ညနေဆို ထိုင်နေကျ အဝိုင်းထိပ်ကဆိုင် ရှိသေးရဲ့လား
Posted by Thi Ha Thu at 7:50 PM
သင်္ချိုင်းတစ်ဝက် ပန်းခြံတစ်ဝက်
ခေါင်းစဉ်မတပ်နိုင်တဲ့ တေးတွေကို သီဆိုသူ
သူဖုန်းစားကြီး မဟတ္တမဂန္ဓီ ခွက်မှောက်တဲ့နေရာ
သူဖုန်းစားကြီး ဒေါက်တာရီဇော် ခွက်ပျောက်ခဲ့တဲ့နေရာ
မိုးမလင်းသေးတဲ့ အကျဉ်းသား ရပ်ကွက်လေး
လက်သီးများ ပွက်ပွက်ထရာ လယ်ယာမြေ
အနှစ်လေးဆယ်အဓမ္မ အိပ်ယာကြီးကို ကုတ်ခြစ်ခဲ့တဲ့
ငါတို့အစ်မရဲ့ လက်ရုံးကြောတွေ အဲဒီမှာ
မာရ်နတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို တောင်းခံနေရင်း
ငါတို့ညီမလေးရဲ့ တော်လဲသံတွေလည်း ရှိတယ်
ရောဂါသည်တွေရဲ့ ခြင်ဆီနဲ့ မျိုးဖောက်ထားတဲ့
မုန်တိုင်းရဲ့ လက်ဖျံရိုးတွေလည်း ရှိတယ်
သွေးဖောက်ခံရတဲ့ မီးတောက်တွေလည်း ရှိတယ်
ဘ၀များစွာရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတွေကို ရှာနေရင်း
အလံတစ်ပိုင်းဟာ သွေးတိတ်စေတဲ့ ပတ်တီးစ
ပုဝါတစ်ထည်ဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ အလံတစ်ခု ဖြစ်တယ်
အမှောင်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဟာ ကုန်း ရုန်း ထ
အမှောင်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဟာ
ကုန်း ရုန်း ထ
Posted by Thi Ha Thu at 10:42 PM
တစ်ညတည်းနဲ့ အပြီးအပြတ် ကုသနိုင်ဖို့ဆိုတာ မရေရာတဲ့ကိစ္စ။ မနေ့က အကြောင်းတွေ၊ ပြီးတော့ တနေ့က အကြောင်းတွေ၊ လေးထောင့်ပုံစံ အရေးအသားတွေ ရင်ဘတ်ထဲမှာ လာလာပြီး ခိုဝင်နေတယ်။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကြားက စီးကရက်ထိပ်ဖျားမှာ လာရောက် ခိုနားနေတယ်။ ထွေးပစ်လိုက် တဲ့ ကွမ်းသွေးတွေထဲ၊ မျိုချလိုက်ရတဲ့ ပူပြင်း ခါးသီးတဲ့ အရသာပျော်ရည်တွေထဲ မှာပါ စီးမျောနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြီးနိုင်အောင်ပဲ ငါက ဆက်လက်ရေးသားနေ လို့၊ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဂီတတွေက ငါ့ကို ဆက်လက်ရေးသားနေ လို့၊ ခဲကောက်ကြောင်းတွေက ငါ့အတ္တကိုပါ ကျူးကျော်ပြီးတော့ ဆက်လက်ရေး သားနေကြလို့။ ငါ ငါ ငါ ဘယ်သူမှ မပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း ရန်ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ စိန်မခေါ်ရဘဲ ငါ့ကိုယ်ငါ ကုန်းကိုက်နေတယ်။ သွေးတွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အမှတ်သညာတွေကို ထွေးထုတ်လိုက်၊ မျိုချလိုက်၊ ဖြစ်တည်မှုကို ကျိတ်ခွဲလိုက်၊ ဖွဲ့စည်းစေလိုက်၊ လွန်းသွားတစ်ချောင်း၊ ပစ္စတင်တစ်ချောင်း။ အကောင်းစားတွေနဲ့ နေပေဦးတဲ့ … သေရာပါကိစ္စတွေက မသေသေးကြဘူး။ ဒီတော့ နောက်တစ်လ၊ နောက်တစ်ပတ်၊ နောက်တစ်ရက် ဆက်ပြီးဖတ်ရှုဖို့ စာညွှန်းတိုတိုလေး တပ် မထားရင်တောင်မှ အသက်ရှုနေတာကို ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ကိုသာ စဉ်းစား၊ ဆက် လက်ရေးသားဆဲကိစ္စ။
Posted by Thi Ha Thu at 11:00 PM
မြို့ထဲသို့ လူတစ်ယောက်ဝင်လာသည်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အင်္ကျီ အဝတ်အစားမပါ။ အင်္ကျီအဝတ်အစားမပါသော ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင် ဆူးချွန်ကြီးများ ပေါက်ရောက်နေသည်။ ဆူးချွန်ကြီးများက သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အရပ်မျက်နှာအသီးသီးသို့ ချိန်ရွယ်ဆန့်တန်းလျက်ရှိသည်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဆူးတွေကိုးရိုးကားရားနှင့်။ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်က ဆူးတွေနဲ့လူကို စတင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဆူးတွေနဲ့လူကြီး၊ ဆူးတွေနဲ့လူကြီး၊ ကလေးငယ်သည် ဤသို့အော်ဟစ်ကာ လမ်းပေါ်မှာ ဆော့ကစားနေရာမှ အိမ်ထဲသို့ ကြောက်လန့်တကြား ပြေးဝင်သွားသည်။ အိမ်ထဲမှာ လူကြီးတွေရှိပုံမရ။ တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ကလေးငယ်သည် အိမ်တံခါးမကို အမြန်ပိတ်ကာ ပြတင်းပေါက်မှ ချောင်းကြည့်နေသည်။ အကြောက်ကတော့ မပြေသေး။ ဆူးတွေနဲ့လူသည် ကလေးငယ်ပုန်းအောင်းနေသောအိမ်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လမ်းမအတိုင်း ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် ဆက်လျှောက်သွားသည်။ ဆူးတွေနဲ့လူသည် သူ့ကိုယ်သူ ကျေနပ်ဟန်ဖြင့် လမ်းကိုဆက်လျှောက်သွားနေသလား။ ဒါမှမဟုတ် မကျေမနပ်ဟန်ဖြင့် လမ်းကိုဆက်လျှောက်သွားနေသလား ခန့်မှန်း၍မရ။ အကြောင်းက သူ့မျက်နှာမှာ ခံစားချက် ကင်းမဲ့နေသူလို ထင်မှတ်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆူးတွေနဲ့လူသည် လမ်းမကြီးကို ဖြတ်ကူးလိုက်သည်။ ထရပ်ကားကြီးတစ်စီးက သူ့ကို ဝင်တိုက်မိတော့မလိုဖြစ်ကာ ဘရိတ်ကို ကျယ်လောင်စွာ အုပ်လိုက်ရသည်။ ဒရိုင်ဘာ၏ဦးခေါင်းက ကားရှေ့ခန်းမှပေါ်လာကာ ကြမ်းတမ်းသောစကားဖြင့် ရေရွတ်ဆဲဆိုလိုက်သည်။ ဆူးတွေနဲ့လူက သူ့ကို ဆဲဆိုအော်ဟစ်သည့် ဒရိုင်ဘာကို ဘာမျှမဖြစ်သလိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဒရိုင်ဘာက ဆူးတွေနဲ့လူကို မြင်တွေ့သွားပြီ။ ဟာ ... တစ်ကိုယ်လုံးဆူးတွေပေါက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်။ ဒရိုင်ဘာသည် အံ့သြထိတ်လန့်စွာဖြင့် ထရပ်ကားကြီးကို အရှိန်မြှင့်မောင်းကာ ပြေးထွက်သွားတော့သည်။ ဆူးတွေနဲ့လူသည် လမ်းမပေါ်မှာဆက်၍ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ရှေ့တွင်လူတွေတရုန်းရုန်း ဝိုင်းအုံကြည့်နေသော ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ လူတွေက ဆူးတွေနဲ့လူကို မမြင်ကြ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာ ငေးမောကြည့်ရှုနေကြသည်။ ဆူးတွေနဲ့လူက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းထဲ ဝင်ရောက်သွားသည်။ အဝတ်အစား မလုံမလဲနှင့် မင်းသမီးက စူးစူးရဲရဲ အထိတ်တလန့်အော်ကာ ထခုန်သည်။ ဗီလိန်တွေ နောက်ဆုတ်သွားကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကို ဝိုင်းအုံကြည့်နေကြသောလူတွေက မထင်မှတ်သောပြကွက်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသဖြင့် တအံ့တသြဖြစ်ကာ စိတ်ဝင်တစား ငေးမောကြည့်နေကြသည်။ ဆူးတွေနဲ့လူက ကင်မရာကို ဖြတ်ကျော်သွားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် အဝေးမှ ဝိုင်ယာလက်ဥသြဆွဲသံများကို စတင်ကြားလာရသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကို ဝိုင်းအုံကြည့်နေကြသော လူများ သဲသဲရုတ်ရုတ်ဖြစ်သွားသည်။ဆူးတွေနဲ့လူသည် လူစည်ကားသော မြို့ထဲသို့ တိုး၍ဝင်သွားသည်။ လူတွေက ဆူးတွေနဲ့လူကို အံ့သြထိတ်လန့်စွာ ကြည့်ရင်း ရှဲပေးကြသည်။ ဆူးတွေနဲ့လူ၏ ခြေလှမ်းများက မရပ်သေး။ အဝေးမှဝိုင်ယာလက်ကား၏ အရေးပေါ်ဥသြဆွဲသံများ တစ်စတစ်စ နီးကပ်လာသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်ကာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ဝိုင်းအုံကြည့်နေသာလူများထဲမှ တစ်စုံတစ်ယောက်က ခဲဖြင့် ပေါက်လိုက်သည်။ ခဲလုံးသည် ဆူးတွေနဲ့လူကို ပြင်းစွာထိမှန်သွားသည်။ ဆူးတွေနဲ့ လူ၏ ခြေလှမ်းများ တုံ့ကနဲရပ်သွားသည်။ လူအုပ်ကြီးကို ခံစားချက်ကင်းမဲ့သော မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်။ လူအုပ်ကြီးကလည်း ဆူးတွေနဲ့လူကို အံ့သြထိတ်လန့်စွာ ကြည့်နေကြ၏။ သူတို့ဝိုင်းအုံကြည့်နေကြစဉ်မှာပင် စောစောက ခဲမှန်သွားသောနေရာ၌ ဆူးကြီးတစ်ချောင်း လူးလွန့်ကာ တလှုပ်လှုပ်နှင့် ထိုးထွက်ပေါက်ရောက်လာသည်။ လူအုပ်ကြီး နောက်သို့ ထပ်၍ ရှဲသွားကြပြန်သည်။ ဝိုင်ယာလက်ကားများ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ပြီ။ ထရပ်ကားကြီးကတော့ အဝေးကိုမနားတမ်း မောင်းနှင်သွားနေခဲ့ပြီ။ ဆူးတွေနဲ့လူက မြို့လယ်ကောင်မှာ။
၂၀၀၃၊ ၂၊ ၆
Posted by Thi Ha Thu at 3:56 PM
၁၅၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 9:29 PM
ကွဲအက်ရာတွေက ဆာလောင်မှုတွေ ယိုစီးလို့
အချိန်နဲ့ နေရာတွေဟာ မလွဲမသွေ လိုအပ်တယ်
ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် “အင့်ခနဲ”
Posted by Thi Ha Thu at 11:12 PM
အခုလို လေပြင်းတွေထဲ ဓာတုအဆိပ်ငွေ့တွေ ထုတ်လွှင့်နေချိန်
ငါ့အသံတွေ မင်းဆီကို ပေးပို့ချင်ပါရဲ့။
ကတ္တီပါသေတ္တာထဲ သော့ခတ်သိမ်းဆည်းကာ ထားခဲ့တယ်
ငါတို့ဟာ ချစ်လို့ ဝေးကွာနေကြရတာပါကွာ။
၅၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၆။
Posted by Thi Ha Thu at 8:34 PM
ဆွဲ မိ ဆွဲရာ စွဲ ခဲ့ ကြရတာ မာ ရီ ယာ။
မင်း ဘာ ထပ်ပေးမှာလဲ
ငါတို့ မှာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ တမ်းတ
ငါ့ဆီက မင်းတို့ ဘာတွေမျှော်လင့် နေတာလဲ တဲ့
ငါတို့မှာ မျှော်လင့် တတ်ခဲ့တာ။
မင်းရက်စက်တတ်မှန်း သိပါတယ် မာရီယာ
ဒါပေမဲ့ မင်းရက်စက်တယ် မာရီယာ လို့
ခပ်တည်တည် နဲ့ ညည်းညူ မျှော်လင့်။
မင့် ရက်စက်မှုမှာ တို့တွေ
ညည်းတွားမှုတွေ အော်သံတွေ သွေးခန်းလုမတတ်
ချွေး တဒီးဒီး သေခြင်း ထိ တိုင်
မင့် မာယာ တွေ။
မင့် မာယာတွေ မာရီယာ
မာယာကော့ခ်စကီး ကို သတ်ပစ်ခဲ့တာ
ဆယ်ဗီယာ ပလပ် ခမျာ၊ ကက်ကိုဘိန်း ခမျာ
ဘုရားသခင် တော် တွေ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ
ဒါနဲ့များ မင့် က ပြောသေးတယ်
ဘုရားသခင် တကယ် ကြင်နာတတ်ရင်
လူသားတွေ ကို မကြင်နာမှ ဖြစ်မယ်လို့။
ဟေ တီမှာ ၊ အင်ဒိုမှာ ၊ နာဂစ်မှာ ၊ ကက်ထရီနာမှာ
အီရတ်မှာ ၊ အီရန်မှာ၊ ဆာယာယေဗိုမှာ ၊ ဟီရိုရှီးမားမှာ
မင့် ခပ်ပြုံးပြုံး နဲ့ ထေ့ပြုံးလေးနဲ့
နောက် ၀မ်းနည်းမျက်ရည်နဲ့ နောက် ချွေး တဒီးဒီး
မာရီယာ မင့် သိပ်ကြင်နာတတ်တယ်ပေါ့လေ
မာရီယာ ဟ ဟား။
လူ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ပွဲတွေ
မင်း ငိုယိုနေခဲ့ပါသလား မာရီယာ။
မင်း ရယ်မောနေခဲ့ပါသလား မာရီယာ။
မင်း ရဲ့ လှပတဲ့ မာယာတွေ
အတွက် မင်း ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ မာရီယာ
မင့် မာယာ ကင်းပြီး ငါတို့ နေခဲ့ချင်ပါရဲ့။
ဒီဟာက ဒီလိုရှိပြီး ဟိုဟာက ဟိုလိုရှိတာနဲ့ပဲ
ငါတို့တွေ ဘုရားသခင်ကို လိုအပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။
ငါ ဘုရား သခင် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မီး ထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့ မြို့ပြကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကလက်ရှနီကော့ခ် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ မင့်ကိုတော့ ကျေးဇူးမတင်ပါရစေနဲ့ မာရီယာ။
ကိုချောလို မင့်ရက်စက်မှုဟာ ကမ္ဘာမှာ မရှိတော့ပါဘူးလို့လဲ
ဖော်ဝေးလို နှလုံးအိမ်ထဲမှာလည်း ရေမငတ်ရပါစေနဲ့။
ကိုက်လမ်းကိုလည်း မလျှောက်ရ ပါစေနဲ့။
မနက် ၂ နာရီမှာ မထချင်လို့ မနက်၂ နာရီ မှာ မထ ရပါစေနဲ့။
လွှမ်းမိုးမှုအပြီး မှာ နုန်းများလည်း တင်မကျန်ခဲ့ရပါစေနဲ့။
ခရေပန်းလည်း မခူးရပါစေနဲ့ လားကွယ် မာရီယာ။
ငါ အဲလို မင်းကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ငါ မတောင်းပန်ချင်ပါ။
ပြန်လျက် နေမိတဲ့ ခွေးလိုပေါ့။
ပြောနေမိပြန်ပါပကောလား ၊ မာရီယာ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 11:19 PM
၀တ္တရားတွေကို မေ့လျော့တတ်တဲ့ အကောင်တွေနဲ့
အသံထွက်လို့မရတဲ့ ဘာသာစကား ရှိတယ်ဆိုတာ
နောက်ဆုံးပိတ်ကျတော့ မသေချာခြင်းတွေပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ
စပ်ဖြဲဖြဲအပြုံးတွေနဲ့ မိုက်ကန်းကန်း အကြည့်တွေဟာ
အချစ်မှာ မူးယစ်မေ့မြောနေတတ်သူတစ်ဦးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ
၃၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 10:45 PM
Posted by Thi Ha Thu at 5:25 PM
နေ့ ရှိသရွေ့ နေကိုကြည့်
နေသိမ်းတဲ့ အထိ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 10:30 PM
လွင့်သွားရတာ တစ်ယောက်တစ်နေရာ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 6:00 PM
အိပ်မက်ဟောင်း ပုံကြမ်းတစ်ခုကို ချချပြီး
မြည်သံစွဲနဲ့ အာမေဋိတ်တွေ လွှမ်းမိုးလာ
Posted by Thi Ha Thu at 8:10 PM
မနက်စာအဖြစ် ဒီဆိုင်လေးမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
ဘာမှ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ဖို့မလိုတဲ့ အသင့်နေထိုင်မှုဘ၀တစ်ခုနဲ့
ခပ်ညံ့ညံ့ကံတရားကိုတော့ တစ်သက်စာအဖြစ် ဒီရှင်သန်မှုမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခံစားမှုကို မီးညှိရှိုက်ဖွာဖို့အတွက် ...
သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 10:11 PM
အရင်ကထက် ဆံပင်တွေ ပိုရှည်လာတယ်
မှတ်ဥာဏ်အချောင်းအတံ (၀ါ) မင်မိုရီစတစ်ထဲ ထည့်ပါ
အဝေးက လှမ်းကြည့်တဲ့အခါ အသက်ဓာတ်ပါ/မပါ
တစ်စုံတစ်ခုကနေ တစ်စုံတစ်ခုကို ကော်ပီကူးယူတယ်
ပလိန်းတီး၊ ကျစိမ့်၊ ကော်ဖီနဲ့ စီးကရက်အစီခံ
(ဒီနေရာမှာ ၀ီစကီဟာ ခြွင်းချက်)
၀ဲလှည့်နေတဲ့ ရှုခင်းတစ်ခု၊ ရွေ့လျားမှုနဲ့ အသံ
ဟောဒီ ပန်းချီကားကို စုတ်ချက်ထပ်သွင်းပါ
ဟောဒီ ပန်းပုရုပ်ကို ကော်ပတ်စားပါ
ဒါက အကြမ်းထည်အတိုင်းထားခဲ့၊ ပြပွဲပို့ဖို့ အချိန်မမီတော့ဘူး
ပြန်ယူလာခဲ့ (ဟောဒီမှာ ရှင်းမယ်ဟေ့)
ဒီလိုပဲ သီချင်းသံတွေကို တန်းလန်းကြီးထားပြန်ခဲ့ရပေမယ့်
သံသရာဆိုတာ အဖန်ထပ်ထပ် မပြတ်ကျင်လည်ရာ
၇၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၀ မနက် ၁၁း၀၀
ရေးဖြစ်ခဲ့သော ခြစ်ရာများ၊ ခြစ်ဖြစ်ခဲ့သော အရေးအသားများ
Posted by Thi Ha Thu at 10:27 PM
ငါတို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများအချို့အ၀က် စွန့်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ၊
ငါတို့ အခဲအယဉ်းတွေကို ရင်ဆိုင်ကြရင်း
ငါတို့မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အမှန်တရာကိုမြတ်နိုးမှု ရှိနေသမျှ
ငါတို့ လောကဓမ္မကို ရင်ဆိုင်အန်တုခဲ့ကြ၊
အာဏာစက်များကို အာဏာမဲ့များထံမှာ တွေ့ရ၊
ငါတို့ ပခုံးသားများထက်မှာ စီးဆင်းသွား၊
ငါတို့ နှလုံးသားတွေထဲမှာ တိုးပွား၊
ငါတို့ကား သူတောင်စင်များ မဟုတ်ကြ။
သို့တိုင် ငါတို့ကား သူယုတ်မာများလည်း မဟုတ်ကြ။
ရုန်းကန်နေကြခြင်းသည်ပင် ငါတို့ဘ၀၏ အမြိုက်ရသာ။
Posted by Thi Ha Thu at 5:42 PM
ကျွန်မအတွက် ကွန်ဒုံးနဲ့ တားဆေး
မင်းကတော့ ၊ မင်းအတွက်မင်း
ခံစား စံစား ရမယ့်အရာမှန်သမျှ
ကျွန်မ တပ်မက်တယ်´၊ ဆိုပါလား။
အရေးမကြီးပါဘူး ၊ ဟုတ်လား။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေ အားလုံး
မင်းဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်ဘူး ၊ မဟုတ်လား၊
မင်း အခု အမူးပြေသွားတော့
ငါ့ကို ငါးညှီနံ့လောက်တောင် မသတီ
Posted by Thi Ha Thu at 10:13 PM
ဟက် ဟက် ပက် ပက်
လွှတ် . . . လွှတ် . . . လွှတ်ချလိုက်
ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို ဈေးကြီးပေးပြီး
Posted by Thi Ha Thu at 10:48 PM
ပုဂံခေတ်နဲ့ ပန့်ခ်လည်း ရောပါစေ
ပြီးတော့ သွေးသားတစ်ခုလည်း ကျွန်တော့်မှာရှိရဲ့
Posted by Thi Ha Thu at 10:46 PM
ငါဟာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ထဲ နေထိုင်လို့
လူကြပ်သောဘတ်စ်ကားနှင့် ခရီးသည် အချိုးအဆ
တီးခတ်စဉ်မှာ ဒီလိုပါပဲ ဒီလိုပါပဲလို့
မင်းကို စီးကရက်တစ်လိပ်လို သိမ်းဆည်းမိ
ဝေးလံသော၊ သာ၍ ဝေးလံသော
ဆန့်ထွက်နေသော သင်၏ ............... များ
ငါပန်းချီကားထဲက လှမ်းထွက်မသွားခင်အထိ။ ။
ဖေဖေက မိတ္ထီလာကန်တော်က ဖားကောက်ခဲ့ဖို့
Posted by Thi Ha Thu at 10:26 PM
အဖိုးဟာ ထိုင်ခုံမှာ နေ့စဉ် ထိုင်နေခဲ့တယ်။
အဖိုးရဲ့ ရေဒီယို၊ ဆေးဘူးတွေနဲ့ ပြည့်လို့။
အဖေ အလုပ်ကပြန်လာရင် အဖိုးထိုင်ခုံမှာ ဝင် ဝင် ထိုင်တတ်တော့
“အဖေ ဘာလို့ ထိုင်ခုံ အသစ်တစ်လုံး မဝယ်ရတာလဲ” လို့။
အဖိုးရဲ့ ထိုင်ခုံဟာ အဖေ နေ့စဉ် ထိုင်နေကျ ဖြစ်လာပြီ။
အဖေ့ရဲ့ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ၊ ဆေးဘူးအချို့ ရောက်လာပြီ။
ကျွန်တော် အလုပ်က ပြန်လာရင်
အဖေ့ထိုင်ခုံမှာ ဝင် ဝင် ထိုင်တတ်လာပြီ။
“ထိုင်ခုံအသစ်တစ်လုံး မလိုအပ်ပါဘူး” လို့ . . .
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်အရ
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အနီးတဝိုက်
နေရာကွက်ကြား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း ၈၀ ဆိုသော်ငြား
ကန်တော်ကြီးအတွင်း ငါးမမျှားရ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် သုံးကိုက်အကွာ၊
ပေါင်မုန့် အသားညှပ် ၂ချပ်။
“လေကိုရှူရှိုက်ခြင်း ဒုတိယပုံစံ၊ ရေး-သစ္စာနီ” ဝတ္ထုတိုအား
အခြား ရေးသွင်းချက် မတွေ့ရ။
ဖိနပ်နှစ်ဖက်ကို ညီညာစွာ ယှဉ်၍ ချွတ်ထားခဲ့သည်။ ။
မျိုးစုံ မျိုးစုံ မျိုးစုံ
ကွဲမသွားတော့မယ့် သူငယ်ချင်းတွေ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 8:23 PM
ဘုရားသခင် မသိစေနဲ့။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 10:24 PM
အလင်းနဲ့ အမှောင်ရဲ့ လှည့်စားမှုတွေထဲ ပျော်ရွှင်စွာ
ဆော့ကစားကြ၊ အတ္တကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့
မဟာစွမ်းအားရှင်တွေပေါ့။ မွေးဖွား- ကြီးပြင်း
ချောက်နက်ထဲ ခုန်ဆင်းရင် သူရဲကောင်းလား။
ရာဇဝင်ကြီးတွေ၊ သမိုင်းကြီးတွေ၊ ဇာတ်လမ်းကြီးတွေက
ပိတ်ဆီးကာရံထား။ ကင်းဗတ်စ်သားပေါ်က အရုပ်နဲ့
အရောင်တွေ၊ သူတို့ အချုပ်အနှောင်ခံထားရသလိုလို
မဟုတ်ဘူး- အမြင်ကို အကျဉ်းချမယ့် ပြတင်းဝတွေပ။
သိမှုဗေဒတွေ ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြ။ ပင်မရေစီးတွေဟာ
ကြောက်မက်ဖွယ် တန်ခိုးသြဇာ၊ နတ်ဆိုးရဲ့ ကျိန်စာများ။
အသက်ဇီဝရှင်သန်ရပုံတွေ ပိုရှုပ်ထွေး ပိုခက်ခဲ ပိုနက်ရှိုင်း။
သီအိုရီတွေက မဆုံးနိုင်ပါဘူး။ ဝါဒတရားတွေက
ဝါးပင်ပမာ၊ မိုးဦးလေဦးထဲ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းထဲ
ညဥ့်နက်နက်တွေပါပဲ။ ရှေ့ကို ခရီးဆက်ခဲ့ကြ
မနက်လင်းရင် ရွာရောက်မယ် ဘာကြောင့်ယုံကြည်။
ဖြစ်မှုသက်သက်မျှ။ အနိုင်ရသူတွေ စီးဆင်းသွားကြရဲ့။
ရာစုနှစ်များတိုင်၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုများ မရပ်တန့်ခဲ့။
တစ်ကန့်ချင်း တစ်လွှာချင်းစီမှာ ပညာသားအဖြာဖြာ။
အားထုတ်ကြ- ဆုတောင်းကြ- လွတ်မြောက်ရပါစေသားတဲ့
နံရံရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ဆီသို့ အန္တိမမျှော်လင့်ချက်များ။
၃၀၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
ရေချိုးပြီးတော့လည်း ဘာထူးလဲ ဒီအဝတ်အစားကိုပဲ ပြန်ပြန်ဝတ်နေရ
မင်းအရောင်းအဝယ် ဘယ်လောက်ပါးဖူးသလဲ။ မင်း ငွေပြန်အမ်းတာ
မှားဖူးလား။ မင်းမှာ ရစရာ ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ မင်းမှာ ပေးစရာရော
ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ မင်းမှာ ခရီးစရိတ် ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ၊ မင်းမှာ
သွားစရာလမ်း ရှိသေးလို့လား၊ မင်းမှာ အင်္ကျီအသစ် ဘယ်နှထည်ရှိလဲ
မင်းမှာ ပွဲလမ်းသဘင် ဘယ်နှခုတက်ဖို့ရှိလဲ၊ မင်းမှာ သော့ဘယ်နှချောင်း
ရှိသလဲ၊ မင်းမှာ ဖွင့်စရာ သော့ခလောက်ရော ရှိလို့လား၊ မင်းမှာ
သိမ်းထားစရာ ပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ မင်းမှာ
လူတွေ့မခံရလောက်မယ့်အဖြစ် ကြုံဖူးလား၊ မင်းမျက်မှန် အနီးအဝေး
ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ မင်းမတွေ့ဖူးသေးတဲ့အရာ ဘယ်နှခုရှိသလဲ
မင်းမှာ အကုန်သိ အကုန်တတ် ပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလား၊ ခုမှတွေ့တယ်
... မင်းက ပါးစပ်ကြီးနဲ့ပဲ ...
မင်းက ပါးစပ်ကြီးကို မြင်သွားပြီလား
ဒါဆိုအဲဒီပါးစပ်ကပဲ မင်းကိုမေးစရာ ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲလို့မေးလိမ့်မယ်။
ဖြေစရာအဖြေတစ်ခုခုရွေးဖို့ မင်းမှာ ဦးနှောက်ရှိလား။
မင်းက ဦးနှောက်ကိုပါ တွေ့သွားပြန်ပြီလား
ဒါဆို အဲဒီဦးနှောက်ကပဲ မင်းကိုမေးစရာ ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲလို့
မင်းမှာ ဖြေစရာ အဖြေတစ်ခုခုရွေးဖို့ ရွေးချယ်စရာ ကျန်သေးလား
၂၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၅
နှစ်ကာလများ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၈။
Posted by Thi Ha Thu at 9:52 PM
ဒီမှာ . . .
ခင်ဗျား ဘာကို ငြိတွယ်နေမှာလဲ
ခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိအောင်ကြိုးစားပါ
ခင်ဗျားနဲ့ ဆက်စပ်နေတာတွေကို သိအောင်ကြိုးစားပါ
မထင်လေနဲ့ . . .)
ခင်ဗျားရဲ့ အစစ်အမှန်လောကနဲ့ အခြားသောအိပ်မက်များ
၂၈၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၆
သူမက မီးတောင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်
ကျွန်တော်က သူမကို စိတ်ဝင်စားတယ်
မီးတောင်တွေအကြောင်း သူမ လေ့လာသလို
သူမအကြောင်းကို ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့တယ်
“မီးတောင်တွေဟာ အမျက်ကို တော်ရုံ အပြင် ထုတ်မပြကြဘူး”
သူမ အမြဲ ပြောခဲ့တယ်
၁၁၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 10:18 PM
လူစွမ်းကောင်း ကဗျာ (၂)
သူရို့ကယ်မှ ရမယ့် ကမ္ဘာမဟုတ်ဘူး
ပြောပြောဆိုဆို Neo ရောက်လာ
၀၉၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 8:17 PM
သို့ မေမေ (၇)
၀၈၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 11:34 AM
စာရွက်ဘယ်မှာလဲ ငါ လာနေပြီလား
ထမင်းဝဝစားလို့ ဗိုက်တင်းတဲ့အခါ ဒါမျိုးလား
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်တွေကို ကျော်ခဲ့ပြီလား
ခင်ဗျားတို့ ပြောစကား အားလုံးကြားတယ်
... တားတဲ့ကြားက ရူးရူးမိုက်မိုက် ... ...
... ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ကျုပ်တို့လိုအပ်နေတာ ... ...
... မလိုအပ်ဘဲ စကားလုံးတွေ တလွဲသုံးစွဲ ... ...
ဗြုန်းခနဲပါပဲ (ဗြုန်းခနဲဟာ မြည်သံစွဲအလင်္ကာမဟုတ်ဘူး)
ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ ဝေ့ဝဲသွားလိုက်တာ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်
မီးနဲ့လောင်စာ၊ လောင်စာနဲ့မီး၊ ပြီးတော့တာပဲ
ရှေ့ခရီး ... ... ... ... ...
ခင်ဗျား စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလည်း မှန်ဘီလူးကိုင်
အရင်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကျော်လွှားဖြတ်သန်းကြပါစေ
ရေကို ရေလို့ မမြင်ဘဲ
ဒါမှမဟုတ်၊ စိတ်ကူးတစ်ခုလို့ မြင်ကြည့်ကြပါလား။
၄၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၆။
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၇)
ဒီနေ့ကျမှ နေရောင်ကလည်း စူးရှလွန်းတယ်။
၀၇၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 7:27 PM
(၁) လမ်းရှိလို့ လျှောက်နေရတာပါ
(၂) အမောင် တောင်၊ မြောက် မသိပါ။
(၃) ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ
(၄) မှတ်ပုံတင်မှာ ရေးသွင်းထားရဲ့
(၅) ငါးပါးသီလ ကျိုးတစ်ခါ၊ ပေါက်တစ်လှည့်။
(၇) မအောင်မြင်တဲ့ ပြက်လုံးတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့။
(၈) ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ကဗျာ၊ ငွေ၊ ငွေ။
(၉) ဝီစကီ၊ ဝီစကီ၊ ကဗျာ၊ ဝီစကီ။
(၁၁) ကိုယ်ကပဲ ရှေ့ရောက်နေသလိုလို
(၁၄) သာမန်မျှပါပဲ၊ သာမန်ပါပဲ။
(၁၆) - - - - - -
(၁၈) . . . . . . . . .
(၁၉) ( )
(၂၂) . . . . . . .
(၂၄) ဘုရားအဆူဆူ လွဲခဲ့ပြီးလေသော အမောင်
(၂၅) တောင်၊ မြောက် မသိသေးပါ။
၀၃၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 12:44 AM
သူသည် တယ်လီဖုန်းစကားပြောခွက်မှတစ်ဆင့် လှမ်း၍ခေါ်လိုက်သည်။ တစ်ဖက်မှထူးသံ မကြားရသေး။ သူက ထပ်မံ၍ ခေါ်လိုက်ပြန်သည်။ မေမေ ... ဟယ်လိုမေမေ ... ။ သူ့အသံသည် တယ်လီဖုန်းဝိုင်ယာကြိုးမှတစ်ဆင့် အခြားတစ်ဖက်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပေပြီ။ ဘယ်သူလဲ။ တစ်ဖက်မှ ထူးသံကြားရ၏။ ဟယ်လိုမေမေလား ... ကျွန်တော်ပါ။ သူကအားတက်သရော ပြန်ပြောလိုက်သည်။ သူ့အသံက နူးညံ့နေသည်။ ဘယ်ကကျွန်တော်လဲ။ မင်းဘယ်သူ့ဆီ ဆက်နေတာလဲ။ ငါမင်းမေမေ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်မှ စကားသံကို သူသေသေချောချာကြားလိုက်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ သူအားမလျှော့ပါ။ မေမေ ... ကျွန်တော်ပါ။ မေမေနဲ့စကားပြောဖို့ ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ထင်သလဲ။ မေမေ ... နေကောင်းရဲ့လား။ သူသည် စကားပြောခွက်ကိုကိုင်ကာ အငမ်းမရပြောချလိုက်သည်။ တစ်ဖက်မှ စကားသံ တိတ်သွားပြန်သည်။ သူက တယ်လီဖုန်း စကားပြောခွက်ကို ကိုင်ကာ တစ်ဖက်မှစကားသံကို ငံ့လင့်နေသည်။ မေမေ ကျွန်တော်ပြောနေတာကြားရဲ့လား ပြောပါဦး။ သူက ထပ်မံ၍ပြောလိုက်ပြန်သည်။ မေမေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲလား။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်တော့ တစ်ဖက်မှ စကားသံ ပြန်လည်စီးဝင်လာခဲ့သည်။ ဘယ်က မေမေလဲ။ မင်းဖုန်းမှားနေပြီကွ။ ငါဟာဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်သူ့ မေမေမှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ မင်းကို ရှင်းအောင်ပြောရရင် ငါဟာ ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှလည်း အိမ်ထောင်မပြုခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပဲ။ သူသည် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ဦးခေါင်းကို ခါယမ်းလိုက်သည်။ မေမေညာနေတာ ... သူက အော်ပြောလိုက်သေးသည်။ သို့သော် သူ့စကားသံကို တစ်ဖက်မှ မကြားနိုင်တော့ပါ။ ဖုန်းချသွားပြီဖြစ်သည်။ သူသည် တီးတိုးရေရွတ်ကာ ဖုန်းကို ပြန်ချလိုက်သည်။ ဒီတစ်ယောက်ကလည်း မေမေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဖုန်းချသွားပြန်ပြီ။ သူသက်ပြင်းတစ်ချက် ရှိုက်လိုက်သည်။ တယ်လီဖုန်းအစောင့်က သူ့ကို နားမလည်နိုင်သလိုကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်နောက်တစ် Call ခေါ်မယ်။ သူက စိတ်အားထက်သန်လာဟန်ဖြင့် တယ်လီဖုန်းအစောင့်ကို ပြောလိုက်သည်။ တယ်လီဖုန်းအစောင့်က ဘယ်ကိုလဲ မြို့တွင်းလား၊ နယ်ဝေးလားဟု မေးမြန်းလိုက်သည်။ နယ်ဝေး ... ဟုတ်တယ် နယ်ဝေးခေါ်မယ်။ သူ့အဖြေကိုကြားတော့ တယ်လီဖုန်းအစောင့်က ဘယ်နံပါတ်လဲဟုမေးလိုက်သည်။ သူကစိတ်ရှုပ်သွားဟန်ဖြင့် ဘာလို့ဒီလို ကျွန်တော့်ကိုမေးရတာလဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာပဲဆိုတာ ခင်ဗျားသိဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီမှာခင်ဗျာ ... ဒီဖုန်းကနေခေါ်လို့ရမယ့် နယ်ဝေးဖုန်းနံပါတ်တွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိမလဲ။ ကျွန်တော် အားလုံးကို ခေါ်မယ်။ ကျွန်တော့်မေမေနဲ့ စကားပြောရမှဖြစ်မှာ။ မေ့မေ့ကို ကျွန်တော် အဆုံးအရှူံးခံလို့မဖြစ်ဘူး။ လုပ်စမ်းပါဗျာ။ မေမေ နယ်ဝေးမြို့တစ်မြို့ ရောက်နေတာဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားခေါ်လို့ရမယ့် နံပါတ်တစ်ခုခု အရင်မြန်မြန်ခေါ်ပေးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ (သူနာရီကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။) မေမေ့ကို အရေးကြီးတဲ့စကား ပြောစရာတွေရှိတယ်။ သူသည် မရပ်မနားပြောချလိုက်သည်။ တယ်လီဖုန်းအစောင့်က သူ့ကိုကြည့်ကာ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုဖုန်းနံပါတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ သိဖို့ မလိုပါ။ ဆေးရုံတစ်ရုံ သို့မဟုတ် ရဲစခန်း သို့မဟုတ် မီးသတ်ဌာနတစ်ခု သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ရုံ သို့မဟုတ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်း သို့မဟုတ် ဟောလီးဝုဒ်က ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခု ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဟယ်လို မေမေ ... ။
၂၀၀၃၊ ၃၊ ၂၂
Posted by Thi Ha Thu at 9:27 PM
နေ့လယ်ခင်းက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍ ပူပြင်းနေပေသည်။ ယခု အချိန်တွင် သစ်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်ဖြစ်စေ လှုပ်နေဖို့ကောင်းသည်။ သို့ရာတွင် ပူပြင်းငြိမ်သက်သော လေထုထဲ၌ အရာအားလုံးရပ်တန့်နေသလိုပင် ထင်မှတ်ရပါသည်။ မျဉ်းဖြောင့်သဏ္ဌာန်ငြိမ်သက်နေသော ဓာတ်တိုင်များ၊ မျဉ်းလဲသဏ္ဌာန် သွယ်တန်းသွားသောဝိုင်ယာကြိုးများ။ ကဖေးဆိုင် မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှာ ငေါငေါကြီးထိုးထွက်ကာ ယနေ့မှမီးခိုးငွေ့ပျံ့လွင့်ခြင်းမရှိ ဖြစ်နေသည်။ (မှတ်ချက်-အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကဖေးဆိုင်ပိတ်ထားပါသည်။) ငြိမ်သက်နေသော လမ်းမပူပူ၏တစ်ဖက်တွင်ရှိ အပေါင်ဆိုင်ကလည်း ငြိမ်သက်လျက်။ ယုတ်စွအဆုံး ခွေးတစ်ကောင်ပင်လျှင် ငြိမ်သက်လျက် ယုတ်စွအဆုံး အပေါင်ဆိုင်ကောင်တာပေါက်၏ အောက်ခြေတွင် ဝပ်နေသောခွေးတစ်ကောင်ပင်လျှင် ငြိမ်သက်လျှက်။ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ကျင့်သားရလာကာ ပို၍ငြိမ်သက်လာသလိုပင်။ အပေါင်ဆိုင်၏ အတွင်းပိုင်း ခပ်မှောင်မှောင်အခန်းထဲတွင် အပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင် သူ၏ ဝဖိုင့်ဖိုင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ပုံတင်ကာ ငြိမ်သက်နေလေသည်။ ခပ်မှောင်မှောင်အတွင်းခန်းထဲမှာပင် ဖြစ်လင့်ကစား သူ့ဦးခေါင်းထက်ဆီတွင် သက္ကလတ်ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားလေသည်။ မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်စေ သူ့အနေနှင့် ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏ ထိပ်ပြောင်ပြောင်ပေါ်တွင် ဆံပင်တချို့ ကျိုးတိုးကျဲတဲပေါက်ကာ အရုပ်ဆိုးသောဦးခေါင်းကို လူတွေမတွေ့မြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ငြိမ်သက်နေသောနေ့လယ်ခင်း၊ ငြိမ်သက်နေသောလမ်းမ၊ ငြိမ်သက်နေသော အပေါင်ဆိုင်ရှေ့တွင် ခွာသံတခွပ်ခွပ်နဲ့အတူ ရထားလုံးတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် အသွင်ပြောင်းကာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ ရထားလုံးသည် အပေါင်ဆိုင်ရှေ့တည့်တည့်တွင်ရပ်ပြီး ရထားလုံးအတွင်းမှ သတို့သမီးဝတ်စုံနှင့် မိန်းမတစ်ယောက် ထွက်လာသည်။ ရထားလုံးမောင်းသူက မြင်းဇက်ကြိုးကို ဖြေလျော့ကာ အရုပ်တစ်ရုပ်လို ငြိမ်သက်နေလေသည်။ သတို့သမီးဝတ်စုံနှင့် မိန်းမသည် အပေါင်ဆိုင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားကာ အပေါင်ဆိုင်ရှင်ရှေ့သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ အပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကုလားထိုင်ပေါ်မှ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထူမတ်ကာ ဝင်လာသူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ဘာများပေါင်ချင်လို့ပါလဲ (မေးခွန်း)။ အပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏ စကားအဆုံးတွင် သူမသည် သတို့သမီးဝတ်စုံကို ကြမ်းပြင်သို့ ချွတ်ချလိုက်လေသည်။ ကျွန်မ ဒီဝတ်စုံကို ပေါင်ချင်လို့ပဲရှင် (အဖြေ)။ ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း၊ ပေါင်ခြင်း၊ နှံခြင်း ကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ဦးအကျိုးကို တစ်ဦးကဆောင်၍ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုမျိုးလည်း ရှိကြဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ရောင်းချပေါင်နှံသော ပစ္စည်း၏အမျိုးအစား အရည်အသွေးကိုကြည့်ကာ ဝယ်ယူသူ၊ အပေါင်ခံသူတို့ ကြေးဖြတ်ကြမြဲဖြစ်သည်။ ၄င်းပစ္စည်း၏ အမျိုးအစား အရည်အသွေးက ပြောင်းလဲလေ့သိပ်မရှိသော်လည်း အခြေအနေ အချိန်အခါကိုလိုက်၍ တန်ဖိုးမှာမူ ပြောင်းလဲနိုင်ပေသည်။ တိုက်ရိုက်ကုန်ဖလှယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြစဉ်ကမူ တစ်ဦး၏ အပိုပစ္စည်းသည် တစ်ဦး၏ အလိုပစ္စည်းဖြစ်ရန် လိုအပ်ခဲ့ပေသည်။ သို့ရာတွင် နားလည်ရန်ခက်ခဲသော အကြောင်းတစ်ခုမှာ ဤမြို့ကလေး၏ အပေါင်ဆိုင်တိုင်းတွင် သတို့သမီးဝတ်စုံများ ရောက်ရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ရဲ့ အစွန်အဖျားမှာ လူသူအရောက်အပေါက် နည်းလှတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ စန္ဒရားအိုကြီးတစ်လုံးရှိရဲ့။ စန္ဒရားအိုကြီးဟာ ဆေးရောင်တွေမှိန်ဖျော့ပြီး ဖုန်မှုန့်တွေ အထပ်ထပ်တင်နေတယ်။ စန္ဒရားအိုကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပင့်ကူတွေအိမ်ဖွဲ့နေကြတယ်။ အမျိုးအမည်မသိရတဲ့ ပိုးကောင်ငယ်ငယ်ကလေးတွေဟာ စန္ဒရားအိုကြီးထဲမှာ ပုန်းခိုနေတတ်ကြပြီး ညအခါမှာ အပြင်ကိုထွက်ကာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနှံ့ လျှောက်သွားကြတယ်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ ဓမ္မဆရာမရှိတော့တာကြာပါပြီ။ စန္ဒရားအိုကြီးကိုလည်း တီးခတ်သူမရှိခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ တစ်နေ့မှာတော့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ပင်လယ်ရပ်ခြားခရီးဝေးကနေ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆီကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး စန္ဒရားအိုကြီးရှေ့ကို ရောက်သွားတယ်။ သူဟာ စန္ဒရားအိုကြီးကိုမြင်တော့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် တီးခတ်ဦးမယ်လို့ ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ လူငယ်လေးက ဖုန်မှုန့်တွေကို ခါထုတ်လိုက်ပြီး စန္ဒရားအိုကြီးရဲ့အဖုံးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျွီ .. ခနဲမြည်သံရဲ့အဆုံးမှာ လူငယ်လေးရဲ့ သွေးရောင်လွှမ်းပြီး သွယ်လျတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေဟာ စန္ဒရားအိုကြီးရဲ့ ခလုတ်တွေပေါ် ရောက်သွားတယ်။ စန္ဒရားအိုကြီးဆီက အံ့ဖွယ်တေးသံ ထွက်ပေါ်လာရဲ့။
“ငါ့ကို မတီးခတ်ကြပါနဲ့ကွာ၊ ငါနေမကောင်းပါ ... အို ... ငါ့ကို မတီးခတ်ကြပါနဲ့ကွာ၊ ငါနေမကောင်းပါ ...” တဲ့။
၂၀၀၂၊ ၉၊ ၁၇
ညနေ ၅း၂၄ နာရီ
Posted by Thi Ha Thu at 9:55 PM
သူ ငြိမ်နေတယ်။ သူငြိမ်နေရင် ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ နားလည်သူတွေက ပြောကြတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ တရုန်းရုန်း ပွက်ပွက်ထပြီး ရွေ့လျားနေကြတယ်။ မော်တော်ကားတွေ ဟွန်းသံရှည်ရှည် မြည်ပြီး တဝုန်းဝုန်းမောင်းနှင်နေကြတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက လှောင်အိမ်တွေအားလုံးပွင့်သွားခဲ့ပြီ။ မြစ်ဟာတဝေါဝေါ အော်မြည်စီးဆင်းနေတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက လှောင်အိမ်တွေ အခွံဖြစ်သွားပြီ။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ကပွဲရုံတွေထဲမှာ လူတွေမရှိကြတော့ဘူး။ ဝက်ဝံကြီးတစ်ကောင် ရုပ်ရှင်ရုံထဲကို ရောက်နေတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ထရပ်ကားကြီးတစ်စီးက ပေါင်မုန့်တွေကို လူအုပ်ထဲ ပစ်ကြဲပေးနေတယ်။ သူငြိမ်နေတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူငြိမ်နေတယ်လို့ ထင်ရတယ်လေ။
၂၀၀၂၊ ၁၀၊ ၁၆
ညနေ ၅ နာရီ
စိတ်ပူပင်သောကရောက်တယ်ဆိုတာဟာ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းပဲ။ ဒါဆို သူနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတွေ သိပ်များ များနေပြီလား။ စနစ်မကျသေးခင်မှာတော့ ဒီအတိုင်းပဲပေါ့လေ။ သွေးကြောထဲမှာ လျှောက်မောင်းနေတဲ့ ထရပ်ကားအရှိန် သိပ်မြန်လာခဲ့ရင် အိမ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် စားပွဲခုံကိုဖြစ်ဖြစ် ကိုင်ထားလိုက်ရုံသာ။ ပြီးရင် ရေအိုးထဲက ရေအေးအေးတစ်ခွက်ကို ခပ်သောက်လိုက်မယ်လေ။ ထရပ်ကားစက်နှိုးနေသံကို ကြားရသလား။ ဟိုးဝေးဝေးက ယာဉ်ထိန်းရဲရဲ့ ဝီစီမှုတ်သံကို သူကြားတယ်။ သူရပ်ပြီးနားစွင့်တယ်။ ခိုတွေကတော့ ဝီစီမှုတ်သံကို နားမလည်ကြဘူးလေ။ တဝုန်းဝုန်း ထပျံတယ်။ သူရပ်ပြီး သူထပ်ပြီး နားစွင့်တယ်။ မိုးပျံပူဖောင်းတွေ ကောင်းကင်ဆီ အတားအဆီးမရှိ လွင့်မျောပျံတက်နေကြတယ်။ သူဟာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လူသားမဟုတ်ဘူး။ အောက်ဆီဂျင်လူသားပါ။ ဒါကြောင့် မြေသားပေါ်မှာရပ်တည်နေရင်း မြေသားကဖြစ်တဲ့ သောကတွေနဲ့ ဖက်တွယ်နေခဲ့တာပေါ့။ ကြာခဲ့ပြီ။ သူနဲ့သောကတွေ ယဉ်ပါးစပြုပြီ။ သူရပ်ပြီး သူထပ်ပြီး နားစွင့်တယ်။ ဝီစီသံ။
Posted by Thi Ha Thu at 10:35 PM
လမ်းပေါ်မှာ မီးသတ်ကားတွေ အော်မြည် ပြေးလွှားနေတယ်။ မီးသတ်ကားဥသြသံတွေက မြို့လူထုရဲ့ အသည်းနှလုံးကို သိမ်းကျုံးဆွဲငင်ယူလိုက်တယ်။ အချိန်က နွားရိုင်းသွင်းချိန် မှောင်ရီဖျိုးဖျ၊ ဟိုမှသည်မှ သွားလာနေတဲ့ယာဉ်တွေဟာ အော်မြည်ပြေးလွှား ဝင်ရောက်လာတဲ့ မီးသတ်ကားတွေကို အလျင်အမြန် လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်။ မီးသတ်ကားဥသြသံဟာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဆွဲဆောင်မှု ရှိပေတယ်။ လူတွေလမ်းမပေါ် ပြိုဆင်းလာကြပြီး ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်ကြတယ်။ သံချောင်းတွေ တဒေါင်ဒေါင်ခေါက်ကြတယ်။ မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ထောင့်မှာ ကောင်းကင်ဟာ တစ်မုဟုတ်ချင်း နီရဲတက်လာတယ်။ မီးခိုးလုံးတွေ ပွက်ပွက်ထလာတာကိုလည်း မြင်ရတယ်။ လူတွေရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီး ဣနြေ္ဒမရ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့ ခွေးတွေလည်း တအီအီနဲ့ ဟိုပြေးသည်ပြေး ဖြစ်နေကြတယ်။ နီရဲနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးဟာ ပိုပြီးလင်းထိန်လာနေတယ်။ အဆက်အပြတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မီးသတ်ကားဥသြသံတွေကို ကျွန်တော် နားစိုက်ထောင်နေမိတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဘာကြောင့်များ မီးသတ်ကား ဥသြသံတွေကို စွဲလမ်းနေခဲ့မိပါလိမ့်။ မီးသတ်ကား ဥသြသံတွေဟာ အဖျားမှာ တဖြည်းဖြည်း သေးသွယ်ချွန်မြသွားသလိုပဲ။ ပြီးတော့ အဝေးဆီ ရောက်သွားတယ်။ အစိုးရိမ်ကြီးတတ်တဲ့ မိန်းမတွေကတော့ အထုပ်အပိုးတွေထုပ်၊ သေတ္တာတွေကို ဆွဲထုတ်နေကြရဲ့။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တစ်နာရီနီးပါးလောက် ကြာမြင့်ခဲ့တယ်။ မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ထောင့်မှာ နီရဲနေတဲ့ ကောင်းကင်ဟာ တဖြည်းဖြည်းဖျော့တော့လာတယ်။ မီးညွန့်ကျိုးသွားပြီ။ မီးသတ်ကားတွေရဲ့ ကလိုင်သံကို စိတ်အေးချမ်းဖွယ် ကြားလာရပါပြီ။ လူတွေဟာ ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုယ်ပြန်ဝင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ငြိမ်သက်သွားကြတယ်။ အဲဒီညက ညဥ့်နက်နက်မှာ ကျွန်တော်အိပ်ပျော် သွားတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ မီးသတ်ကားတစ်စီး ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ မီးသတ်သမားတွေ ကားပေါ်ကဆင်းလာပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ဝင်ရောက်လာကြတယ်။ သူတို့ကပြောကြတယ်။ “ခင်ဗျားကိုယ်ထဲမှာ မီးလောင်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်းသတ်ဖို့ပါ” တဲ့။
ညနေ ၅း၁၀ နာရီ
Posted by Thi Ha Thu at 11:44 AM
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အိပ်ပျော်နေချိန်တွင် မီးရထား ခုတ်မောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ မီးရထားသည် ဥသြသံရှည်ကို ဆွဲလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြားကြရပါ။ မြို့သည် ဖျော့တော့သောလရောင်ထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းနေပါသည်။ အဆောက်အအုံများ အားလုံးသည် အမှောင်နှင့် အလင်းဖျော့ဖျော့ ရောထွေးနေသော မှုန်မှိုင်းမှိုင်းအဆင်းထဲတွင် တိတ်ဆိတ်နေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် မီးရထားခုတ်မောင်းဝင်လာခဲ့သည်။ မီးရထား၏ စက်ခေါင်းထဲတွင် မည်းနက်သောကျောက်မီးသွေးတုံးများ နီရဲတောက်ပကာ လင်းထိန်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကြားဖူးကြသည်။ ခေါင်းတိုင်မှ မီးခိုးလုံးကြီးများက တဝုန်းဝုန်းပွက်ထကာ မြို့၏ငြိမ်သက်သောလေထုထဲတွင် ရောနှောပြန့်ကားသွားပါသည်။ မီးရထားသည် ပင်လယ်ကိုဖြတ်ကာ တဂျုံးဂျုံးတဂျက်ဂျက် ခုတ်မောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့ထဲသို့ မီးရထားဝင်ရောက်လာချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အိပ်ပျော်နေလေ့ရှိကြသည်။ ယခုအခါတွင် မီးရထားသည် ကတ္တရာလမ်းမများပေါ်မှာ တရွေ့ရွေ့ ခုတ်မောင်းသွားလာနေသည်။ မြို့၏လမ်းများမှာ အသွားအလာမရှိ လူသူရှင်းလင်းနေသည်။ မီးရထားသည် လူသူကင်းမဲ့သောလမ်းများပေါ်မှာ ညင်ညင်သာသာ ခုတ်မောင်းလာခဲ့သည်။ မီးရထားသည် အချက်ပေးဥသြသံကို စူးရှစွာဆွဲလိုက်ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မကြားနိုင်ပါ။ မီးပွားမီးပွင့်များ ဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ခုန်ထွက်လာသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျောက်မီးသွေးများကို ဂေါ်တစ်လက်ဖြင့်ကျုံးကာ စက်ခေါင်းအတွင်းသို့ လူတစ်ယောက်က လောင်းထည့်ပေးလျက်ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သံဘီးကြီးများသည် မြေပြင်သို့ပင်မထိပဲ လည်ပတ်နေကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြားဖူးနားဝ ရှိခဲ့ကြသည်။ မည်သည့်အလံချိုးသမားမဆို မီးရထားကြီးကို အလံချိုးပေးရလေ့ရှိကြောင်းကိုလည်း အစဉ်အဆက် မှတ်သားခဲ့ကြရပေသည်။ မီးရထားသည် မြို့၏နံရံကို တအိအိနှင့် ညင်သာစွာ တိုးဝင် ခုတ်မောင်းသွားပေသည်။ အမှန်ပင်ဘီးများသည် မြေသို့မထိပဲလည်သွားခဲ့ကြသည်။ မီးရထားသည် ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ခဲ့သော်လည်း သံဘီးများသည် ရေစွတ်စိုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ မီးရထားသည် ဗာဒံပင်တစ်ပင်အောက်မှ ငုံလျှိုးကာ ခုတ်မောင်းသွားသည်။ ဗာဒံပင်သည် ညအချိန်တွင် အရွက်တွေကြွေနေသည်။ မီးရထားသည် ကျွန်ုပ်တို့ မကြားနိုင်သော ဥသြသံကို ဆွဲလိုက်ပြန်သည်။ အချို့က ဤမီးရထားတွင် မီးထိုးသမားတစ်ဦးသာပါရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မီးရထားတွဲများတွင် မည်သည့်အရာများကို တင်ဆောင်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မသိနားမလည်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုပြောနိုင်သည်မှာ မီးရထားသည် ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်သောအရာများကို တင်ဆောင်ကာ ညအချိန်တွင် လှည့်လည်ခုတ်မောင်းတတ်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဝေးလံသောအရပ်မှ ပင်လယ်ကိုဖြတ်ကာ မီးရထားခုတ်မောင်းလာလေ့ရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ တစ်နေ့နေ့တွင် သိရှိလာကြမြဲဖြစ်သည်။ နံနက်လင်းလျှင် မီးရထားသည် ပျောက်ကွယ်သွားမြဲဖြစ်သည်။ မီးရထားသည် စူးရှဥသြသံကို ဆွဲလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ။
၂၀၀၃၊ ၃၊ ၁၇
Posted by Thi Ha Thu at 2:28 PM
ဘယ်ဟာ အတည့်မှန်းမသိရင် ငါ။ ငါ
ငါ ယင်နားစာ မစားမိဖို့အထိ
အကြောင်းကြောင်းနဲ့ လူလိမ်မခံရဖို့ ငါ
လမ်းတွေဟာ မြန်မြန်မြန် ငါ မြန်နေပြီ၊
- အကြောက်အကန်၊ ထွေရာလေးပါးနဲ့ ဘဝအဆက်ဆက်
ငါဟာ သစ်ပင်မစိုက်ဘဲ တစ်သက်လုံးပျော်ရန်လိုမလို
ငါဟာ ဘောက်ချာစာရွက်ပြရန် လိုမလို၊(ရှင်းပြီး)
ငါဟာ အိမ်ထောင်ပြုရန် လိုမလို။ (ရှင်းပြီး)
----------အထိ ငါဟာ လိုမလို “တွေး . .”
ငါ့ကျောပေါ်မှာ ငါကုတ်တွယ်ကပ်ရင်း မျှော့လို ငါတစ်ကောင်ဟာ/ငါးတစ်ကောင်ဟာ
ငါ့ရဲ့သွေးကို လိုမလို။ ငါ့လက်မောင်းသားကို ဖောက်ကြည့်တယ်
ကြိုဆိုပါ၏ ။ ငါ
မီးပွိုင့်ကို မော့ကြည့်။ ငါ
ဓာတ်ကြိုးတွေကို ငုံ့ကြည့်။ ငါ
မော့ကြည့်ခြင်းနှင့် အတည့်များ၊ ငါ
အတည့်များ၊ အတည့်များ အတည့် . . . ။ ငါလိုမလို
အိမ်ထဲပြန်ဝင်။ တုံးနေတဲ့ငါ့အားကို ပြန်ချွန်
ငါတစ်ယောက်ဟာ ငါ့တစ်ယောက်ကို တိုးတိုးကပ်
ငါမေးရန် ငါလိုအပ်သလို/မလိုအပ်သလို။ နားကြပ်နှင့်
စကားပြောခွက်၊ ငါ့စကားသံ အချို့တစ်ဝက်. . .
Posted by Thi Ha Thu at 9:44 PM
မျက်စိပေါက်အတွက် နှစ်ပေါက်၊ ပါးစပ်ထားရန် အပေါက်တစ်ပေါက်
နှာတံအရာ၊ မကြောက်ပါနဲ့ (ကစားစရာ မဟုတ်ပါ)
မြက်ရိတ်စက်ကို ထိဖူးသလား၊ သည်လိုပဲနေမှာပါ
မြက်ရိတ်စက်က မြက်ရိတ်နေတာတော့ ကြားဖူးမှာပါ
ကဲ အဲသလိုဆိုတော့လည်း ကြည့်ကောင်းပါတယ်
သင်က ခေါင်းမှ မဖြီးတာ
မနေ့ ပိတ်ရက်ပဲလေ သင်ဘာလုပ်နေသလဲ
သင့်နာရီက မှန်မပါဘူး မဟုတ်လား
ကိုယ့်မြို့လိုပါပဲ။ သူ့နာရီစင်မှာ မှန်မရှိဘူး
အမှန်မရှိဘူး။ ကိုယ့်သံပတ်ရေနဲ့ကိုယ် ကိုက်ပြီးသား
ကရွတ်ခွေကို သင် လက်နဲ့စမ်းဖူးလား၊ သည်လိုပဲ
သင် ငွေစက္ကူကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အမျိုးအစားခွဲသလဲ
ကရွတ်ခွေရော ငွေစက္ကူရော မတူဘူးလား
ချိန်သီးတစ်ခုကို လက်နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ သင့်လိုနေမှာပဲ
သင်ကရော အဲဒီချိန်သီးရဲ့ ရမ်းသမ်းတဲ့အဖြေကို ယုံတာပဲမဟုတ်လား
သင် ဘာမှမမြင်ဖူးရင် နေပလေ့စေ။
မှန်အနက်နဲ့ မျက်လုံးကိုတပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရသော သင်က
ငွေစက္ကူ ပိုပိုသာသာ ပါလာသလား
ထွားမလာဘူး သူ့အမျိုးက ဒီအတိုင်း
အခြေခံသင်ခန်းစာ (၂)။ လမ်းခင်းကျောက်များအကြောင်း
သင်ဘာမှ မရှုံးသေးပါဘူး။ အခုအနေနဲ့ဆို အကောင်းဆုံးပါ။ ။
၃၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၅
Posted by Thi Ha Thu at 10:03 PM
တခြားထပ် ယုတ္တိရှိပြစရာ မလို၊
နောက်လက စပြီး အိမ်အသုံးစရိတ်ကို အစ်ကိုကြီးမကိုင်နဲ့တော့၊
အစ်ကိုကြီးကပိုက်ဆံကို နှလုံးသားနဲံ့သုံးနေတာ၊ မရဘူး"
နျူးယောက်က မီးသတ်သမားတွေလည်း ရှိတယ်
"ဒီတစ်ပုလင်းလုံးကြီး ကုန်တော့မှ ဒီတစ်ကြောင်းပဲ ရတာလားကွာ၊
ကွဲကွာနေသူ မိသားစုဝင်တို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြစေ
ချိုးငှက်တို့ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်ကြစေ
၂၀၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 1:52 AM
ဘာကို ယုံကြည်ရမလဲ မမေးလိုက်ရသေးခင်
၁၇၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 10:53 PM
မင်းနေ နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးက လည်တယ်
လက်တစ်ဖက်ကို မြဲနေအောင် ကိုင်ထား၊
တိုးရင်းနဲ့ ကလိုက် ကရင်းနဲ့ တိုးလိုက်
ဂါတွေက ဘလပ်ထက် ပိုနူးနေတယ်
အရပ်သားတွေက ဇာတ်သမားတွေထက် ပိုလည်နေတယ်
တစ်ခုခုကို မြဲနေအောင် ကိုင်ထား၊
ကောင်းကင်ပြာကြီးကို မြဲနေအောင် ကိုင်ထား၊
ဝှက်ယူလာတဲ့ ဓားကို မြဲနေအောင်ကိုင်ထား၊
ချစ်စွာသော ဇနီးလေးကို မြဲနေအောင်ကိုင်ထား၊
လက်တစ်ဖက်ကို သူမြင်အောင် မြှောက်ပြလိုက်
လက်တစ်ဖက်ကို လက်တစ်ဖက်လိုပဲ ဆက်ဆံ
လက်တစ်ဖက်ကို မြဲနေအောင်ကိုင်ထား။ ။
ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၅။
Posted by Thi Ha Thu at 9:54 PM
နေ့တာတိုသော နေ့များ၊ နေ့တာရှည်သော နေ့များ
တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ရောက်လာခဲ့/မယ့်
နေသာ လေလာတဲ့ နေ့များ၊
အိမ်ပြန် လမ်းပျောက်တဲ့ နေ့များ၊
ဘီယာဟာ အရက်တော့ မဟုတ်ပါ နေ့များ၊
မတုန်မလှုပ် ကျောက်ရုပ် နေ့များ၊
ကျွဲပါး စောင်းတီး နေ့များ၊
ပိုးသာကုန် မောင်ပုံ စောင်းမတတ် နေ့များ၊
မောင်ချောနွယ် ဆန်သွားတဲ့ နေ့များ။
တရား ဓမ္မနဲ့ နေ့များ၊
အဓမ္မတရား လွှမ်းမိုးတဲ့ နေ့များ၊
အမှတ်တမဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့/မယ့် နေ့များ၊
တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ရောက်လာဦးမယ့်
၀၄၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။
ဘာ ဘာ ဘာမှ မသိဘူး
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ ရေးနေလဲ
ရေတွေပြတ်၊ နေတွေပူ၊ မိုးတွေရွာ၊ မီးတွေလောင်
ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ မီး
ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ ဝိုင်
ဘာ ဘာ ဘာဆို ဘာမှ
သ၊ ဟ၊ သူ
၂၈၊ ၀၅၊ ၂၀၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 9:32 PM
သူမ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဟာ
၂၁၊ ဧပြီ၊ ၂၀၀၆။
Posted by Thi Ha Thu at 9:06 PM
အိုက်စပ်စပ်ပူလောင် ခြောက်သွေ့ ဒီနေ့ဟာ ဘာနေ့လဲ။
တချို့လူတွေက ကိုယ့်မွေးနေ့ မွေးရက်ကို မေ့လို့
တချို့လူတွေက စကားပြောဖို့ မေ့နေကြတယ်။
နံရံပေါ်က ပန်းချီကားဟာ အရောင်တွေ မေ့ပျောက်လွင့်ပြယ်
အိမ်ငယ်လေးထဲ တစ်ယောက်တည်း နေနေရတာ အားငယ်စရာလား။
လမ်းပေါ်ကို ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ လူတွေက ဥဒဟိုသွားလာလို့
ဘတ်စ်ကားတွေက နောက်ပြန်ကြီး မောင်းနှင်နေကြသလိုလို။
ရာသီဥတုသာသာယာယာနဲ့ ကောင်းကင်ဟာ ကြည်လင်နေသယောင်ယောင်
တိမ်ပုပ်တွေ မြောက်မှတောင် ရွေ့လျား အဆန်းတကြယ်။
ဘာများမှားသွားသလဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ အသံတစ်စုံတစ်ရာမကြားရ
ဒီနေ့မှာမှ သူက အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်လာခဲ့မိတယ်။
၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၆
Posted by Thi Ha Thu at 8:54 PM
နေ့တာတို၍ ညတာရှည်သော အလွမ်းများ
အဆောင်ဆောင် အခန်းခန်း ဖြတ်သန်းရင့်ရော် ကျော်မဆုံး
ငါ့ကို ရွံမုန်းလို့နေပြီလား မသိ။
၁၅၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
Posted by Thi Ha Thu at 8:50 PM
အလိုအလျောက်ပါပဲ အလိုမတူလည်း အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို
မိုးစက်တွေ တဖျောဖျောလာကျနေတယ် အဆက်မပြတ်
မင်းဆီကို အဆက်မပြတ် တဖျောဖျောကျလာမှာပဲ လောလောဆယ်
ပိုဆိုးနေတာက အစ္စရေးလ်ဘက်က ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်တွေ
လက်ဘနွန်ထဲကို အဆက်မပြတ် တဝေါဝေါလာကျနေတာ
ဘာထူးလို့လဲ အမေဇုံသစ်တောထဲက သစ်ပင်တွေဟာလည်း
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အဆက်မပြတ် ခုတ်လှဲခြင်းခံနေကြရတာပဲလေ
အဆက်မပြတ် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီဗိုင်းရပ်စ်တွေ မျိုးပွားသလို
ပေါက်ကွဲလွင့်စဉ် အင်တာနက်ဟာလည်း အဆက်မပြတ် မျိုးပွား
နည်းပညာအသစ်အသစ်တွေ အဆက်မပြတ် ပေါ်ထွန်းလာတာနဲ့အမျှ
ယဉ်ကျေးမှုအသစ်အသစ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ်တိုးပွား
အဲဒီတော့ ထိန်းသိမ်းထားရမယ့် ယဉ်ကျေးမှုအဟောင်းတွေလည်း
တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ် ပျက်သုဉ်းကွယ်ပျောက်သွားရပေါ့
ဒါတွေဟာလည်း အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို မိုးစက်တွေ တဖျောဖျော
လာကျသလိုပဲ မဟုတ်လား ဘာမှမဆိုင်သလိုလိုနဲ့ ဆိုင်နေတဲ့
လေထဲမှာ အဆက်မပြတ် ဝှေ့ယမ်းနေတဲ့ မင်းလက်သီးတွေဟာလည်း
ငါ့မေးရိုးတွေပေါ်ကို အဆက်မပြတ် တသောသောလာကျနေကြ
ဒါဟာ အဆက်မပြတ် တရားလွန်နေမှုကြီးဆိုတာ သိကြရဲ့လား
စိတ်ဓာတ်နဲ့ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်စံတွေကတော့ တစ်ဟုန်ထိုး
ထိုးကျနေလိုက်ကြတာ အဆက်မပြတ် အဆက်မပြတ် အဆက်မပြတ်
အဆက်မပြတ်ပါပဲ ငါ့အသက်ဟာလည်း တစ်စက္ကန့်တိုင်း တစ်စက္ကန့်တိုင်း
တဟောဟော တချောချော မောလျပန်းဟိုက် တိုက်စားပါးရှပ်
သွားနေလိုက်တာ အဆက်မပြတ်ပဲပေါ့ ငါ့ကဗျာရေးလက်ခမျာလည်း
သနားစဖွယ် တလျှောလျှော ထိုးကျနေ ထိုးကျနေ ထိုးကျနေ
ထိုးကျနေ ထိုးကျနေ ထိုးကျနေ အဆက်မပြတ် ဘယ်လိုတတ်နိုင်မှာလဲ
မတတ်နိုင်မှုတွေဟာ ငါ့မှာရော ကမ္ဘာကြီးမှာပါ အဆက်မပြတ်
ငါနဲ့ ကမ္ဘာကြီးတောင် အဆက်ပြတ်နေတာ အဆက်မပြတ်ပဲ။
၁၅၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၆
Posted by Thi Ha Thu at 8:46 PM
သွေးကြောထဲ မျောနေတဲ့ ဆူးတစ်ချောင်းလို
Posted by Thi Ha Thu at 11:41 PM
အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဘဝကို ငေးသလိုလို
မီးရောင်တွေ လင်းထိန်တဲ့ ခန်းမကြီးအလယ်
ခေတ်ကြီးထဲ ယောင်ချာချာ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 11:17 PM
ငါတို့အတွက် ဟောဒီ ပင်လယ်ကြီးက ဗုံ
ငါတို့ဟာ ပင်လယ်ဗုံတီးမှ သီချင်းဆိုလို့ရတဲ့ လူမျိုး။ ။
သည်းထိတ်ရင်ဖို၊ ဂျူလိုင်၊ ၂၀၀၈။
Posted by Thi Ha Thu at 9:30 PM
ငါ့မျက်လုံးတွေ ထားခဲ့ရ -
ငါ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်း ငါရှာလို့မရ
ငါ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်း ငါရှာလို့မရ -
မင်းရဲ့ညတွေ ထုတ်ဝတ်သွား -
ငါ့ရဲ့ ဝိညာဉ်လာဖြုတ်သွား . . . ။ ။
မြားနတ်မောင်၊ ဧပြီ။ ၂၀၀၃
စမန ၇၃၊ မြန်မာခေတ်ပြိုင်ကဗျာ လျှပ်တစ်ပြက် ရုပ်ပုံလွှာ
Posted by Thi Ha Thu at 1:35 PM
သဲနဲ့ ဆောက်တဲ့ အိမ်ကလေးမို့ သာ....။
ပင်လယ်ဆီ တရွေ့ ရွေ့ 
Posted by Thi Ha Thu at 10:17 PM
နေမွန်းတည့်တော့လည်း မင်းကိုငါလွမ်းရပြန်ရော။ ။
၂၀၀၉၊ ဂျူလိုင် ၂၂
Posted by Thi Ha Thu at 9:28 AM
သင်္ဘောပျက်ပြီပဲ ရေငတ်ပြီပဲ ဒီရေမသောက်လို့ဘယ်ရေသောက်ရမလဲ
ဆိုတော့....သောက်တာပေါ့၊ သောက်ရတာပေါ့၊ ဒီပင်လယ်ရေပဲ သောက်ရတာပေါ့
လူ့ ဘ၀ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအဖြစ်ကို သင်္ဘောပျက်မှပဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ရ
ဘာတတ်နိုင်မလဲ ဒီပင်လယ်ရေပဲ သောက်ရတာပေါ့
Survival Craft ပေါ်မှာဆိုတော့ ဒီပင်လယ်ရေပဲသောက်ရတာပေါ့
လူအများနဲ့ မတူချင်လို့ မရ ဒီပင်လယ်ရေပဲ သောက်ရတာပေါ့
သောက်လို့ မရဘူးဆိုလည်း ဒီပင်လယ်ရေပဲ သောက်ရတာပေါ့
လာကယ်မယ့်သင်္ဘောလာမှပဲ ပါတီပွဲတွေပြန်တက်၊ လည်စီးတွေပြန်တပ်ပြီး လူကြီးလူကောင်းပြန်ဆန်ရမှာပေါ့
အခုတော့ ရူးချင်ရူး သေချင်သေ ဒီပင်လယ်ရေပဲ မျက်စိမှိတ် သောက်နေရတာပေါ့။ ။
၂၀၀၉၊ စက်တင်ဘာ ၁၉
Posted by Thi Ha Thu at 1:53 PM
ဦးနှောက်ကို ခလုတ်ပိတ်ထားလိုက်။ ။
အမေက နတ်မောက်မှာ ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်နဲ့
ကဗျာတစ်ပုဒ်မှ မရေးတဲ့ ကဗျာဆရာပဲ
ခင်ဗျားပါးစပ်ထဲ တမာပင်တွေ သွားကြားထိုးလို့
ခင်ဗျားက ရှေ့နေရဲ့သားဆိုတော့ ရှေ့ကနေခဲ့တယ်
အခြားသူတွေရဲ့အနားမှာ ခင်ဗျား ဝင်ဖျားပေးခဲ့သမျှ
အခု ခင်ဗျားက တစ်ရွာလုံးရဲ့အောင်လက်မှတ်ပဲ
အခု လည်နေတဲ့ကမ္ဘာထဲ နေ့တိုင်းချိတ်ပါနေတယ်။
ခင်ဗျားကဗျာကို စာရွက်ထဲ ချရေးဖို့
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ စာရွက်တွေနဲ့ ဘယ်လောက်ပါ့မလဲ
ဒါပေမယ့် နောက်လိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ခေတ်ကြီးတစ်ခုလုံး
ခင်ဗျားက တောသူတောင်သားပဲ မြို့ကြီးသားပဲ
ခင်ဗျားက မြေကြီးပဲ လေပဲ
ခင်ဗျားက ညတိုင်းရွာနေတဲ့ လရောင်ပဲ
ခင်ဗျားက သမိုင်းစာအုပ်ထဲစိုက်ဝင်နေတဲ့ မြှားပဲ
ကဗျာတစ်ပုဒ်မှ မရေးတဲ့ ကဗျာဆရာပဲ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 8:55 PM
Labels: ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်)
ဗြူတီ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၀။
Posted by Thi Ha Thu at 8:38 PM
ရေဒီယိုဟောင်းလေးလည်း သီချင်းလေးတွေ ညည်းလို့
သား ပျော်တယ်လို့ထင်ပါတယ် မေမေ
သား ပျော်ချင်ပါတယ် မေမေ
ပျော်တယ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ့် မေမေ…
၂၃၊ ၀၂၊ ၂၀၁၀
သို့ မေမေ (၂)
ဘဂ္ဂဒက်မှာ လမ်းဘေးဗုံးတစ်လုံးတော့ ပေါက်ပြီးရောပေါ့
ဂင်ဇာလမ်းမကြီးမှာ လူတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ် ကြိတ်ကြိတ်တိုးလို့နေရောပေါ့
အာဖဂန်မှာ အသေခံဗုံးခွဲမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြီးရောပေါ့
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းလေးပေါ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေးနေရောင်ခြည်တို့ကျနေရောပေါ့
အာဖရိကမှာ ထမင်းစား/ဆာ ပြီးရောပေါ့
ဒီအချိန်ဆို ဟော်တယ်ကြီးတွေမှာ စားပွဲ သောက်ပွဲတွေ စလောက်ရောပေါ့
မစ္စတာ အိုဘားမားလည်း ဘဲဥပုံရုံးခန်းထဲ အချိန်ပိုဆင်းနေရောပေါ့
မေမေလည်း မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ပြီးရောပေါ့
သားလည်း မေတ္တာပို့ အမျှဝေပြီး အိပ်ရာဝင်တော့မှာပေါ့
သို့ မေမေ (၃)
ပင်လယ်ဟာ သားကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်
ပင်လယ်ရောက်ပြန်တော့ ကမ်းကို လွမ်းရပါတယ်
ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန် သီချင်းကို ညည်းတတ်လာတယ်
အမေ့အိမ် သီချင်းကို ညည်းတတ်လာတယ်
စိတ္တဇနာမ်ရဲ့ အကောင်အထည်ကို မြင်/ကြုံတွေ့/ခံစားလာရတယ်
မေမေ့ဆီ သား စာရေးလိုက်ပါတယ်…
သို့ မေမေ (၄)
သီချင်းတွေကိုလည်း ငြီးငွေ့လာတယ်၊ ရုပ်ရှင်တွေကိုလည်း ငြီးငွေ့လာတယ်၊ စာအုပ်တွေကိုလည်း ငြီးငွေ့လာတယ်၊ လူတွေကိုလည်း ငြီးငွေ့လာတယ်၊ မေမေ့ဆီ စာရေးရတာကိုတော့ သား (ဘယ်တော့မှ) မငြီးငွေ့ဘူး မေမေရယ်။
သို့ မေမေ (၅)
သို့ မေမေ (၆)
၂၈၊ ၀၂၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 8:08 PM
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၅)
၂၈၊ ၀၂၊ ၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 8:06 PM
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၄)
၆၊ ၂၊ ၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 2:20 PM
ကာတွန်းအရင်၊ ပြီး အားကစားသတင်း
လူတစ်ယောက်၊ ပူမှုရယ်တဲ့ တစ်ရာ နှစ်ရာ
သန်းတစ်ထောင်၊ အများလို အနည်းစားခြေ
၂၊ ၂၊ ၁၀။
Posted by Thi Ha Thu at 2:19 PM
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၃)
Posted by Thi Ha Thu at 2:18 PM
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၂)
ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှား ဂြိုဟ်ပဲ့ကနေ အလင်းအထိ
၂၊ ၁၊ ၂၀၁၀
Posted by Thi Ha Thu at 12:13 AM
ကျားကွက်သစ်၊ အဝိုင်းထိပ်၊ လှည်းတန်းမှသည် မှေးမှိန်...
ရေးဖြစ်ခဲ့သော ခြစ်ရာများ၊ ခြစ်ဖြစ်ခဲ့သော အရေးအသားမ...
ရေချိုးပြီးတော့လည်း ဘာထူးလဲ ဒီအဝတ်အစားကိုပဲ ပြန်ပြ...